Category:Lingwistika - Wikipedia
Iilwimi (kenzoku) yindlela yezenzululwazi (iinjululwazi) zeelwimi ezifana neelwimi zendalo kunye neelwimi ezenziwayo ezisetyenziswa ngabantu, kuquka neengcali zendalo kuphela kodwa noluntu Kwaye inzululwazi yentlalo nayo ifakiwe).
Injongo yeelwimi zanamhlanje kukuchaza ngokucacileyo nokucacisa iilwimi zabantu. Xa "injongo", oko kuthetha ukuba eneneni inkcazelo ulwimi, ecacisa umthetho kunye nohlobo nge data zeelwimi yabonakala langoku, "inkcazelo", imithetho kuhamba gabalala Eyona nto yolwimi kwakunye "Inkcazo" kukucacisa isizathu sokuba kutheni umgaqo / umqobo owenzayo.
Iilwimi zanamhlanje azithethi ukuphakama kolwimi okanye ukungaphantsi. Kunoko, ngeelwimi, kucingwa ukuba ukuphakama akukho kuzo zonke iilwimi. Ngoko ke, zonke iilwimi zehlabathi ziphathwa ngokulinganayo. Xa kuthathwa njengotshintsho ngokwezembali nasekusungulweni ngolwimi ulwimi, ngengcamango, ezifana ukuze angqamane ukuntsonkotha lokuvuthwa kunye nolwimi inkqubo kuluntu kunye nempucuko kwakukho abathile. Nangona kunjalo, kwacaca kamva ukuba nayiphi na ulwimi ilinqanaba elithile lokuxakeka, kwaye loo mbono sele iphikisiwe. Oko, ulwimi ukuganga, ngaphandle ulwimi advanced ukho, lo gama zonke iilwimi izalana ngokusondeleyo ekuhlaleni kulwimi ngalunye, ezisetyenziswa ukuqhelana kuluntu nganye, imboniselo yangoku kweelwimi kukuba .
Ulwimi kukufunda iilwimi ngaphandle kweelwimi ngolwimi ngolwimi olusetyenziso olufanelekileyo, kwaye luhluke kwiilwimi ezifundiswa ulwimi. Nangona kunjalo, "ulwimi" lungasetyenziselwa ngengqondo yeelwimi .
Inkcazelo yeelwimi neempawu
Bona kwakhona "ulwimi"
Kwiilwimi sithetha ngeelwimi ezithethwa ngabantu. Ngoko ke, kuyimfuneko ukuba ukucacisa ukuba "abantu abathetha olo lwimi," kodwa inkcazelo ingxaki "ulwimi" ngabaphengululi ayikenziwa ilungiswe.
Iimpawu zolwimi ezibonakala ngathi zingundoqo zichazwe ngezantsi.
Saussure, "Noki" (Signifiant) kwaye usebenzisa i "Tokoroki" iikhonsepthi ezimbini (signifié) (signifier waqondisa), ubudlelwane kunqandwa phakathi intetho-iifom kunye neempawu zazo iintsingiselo ulwimi Ndandishumayeza ukungabikho kobungqina belilwimi ukuba akukho. Kukho imbono yokuba luphawu lwesandi njengesimo esiphathelene nale nto. Le ntetho ethile okanye amanakani phoneme ngokwayo, kukho izinto ezifana nombono, iisimboli ulwimi ukuba wenza zinokudityaniswa kwezi. Nangona kunjalo, ekubeni akukho mqondiso ozwakalayo wonkqantosi kuyo nayiphi na ilwimi ekusebenzeni, akukho phando olunzulu malunga nesimo seelwimi ngeli xesha.
Eli khasi lagqityelwa ukulungiswa kwi-21 EyoMdumba 2019, kwi-13:15